Ucwaningo ngokusetshenziswa kolimi lwesiZulu ngenhloso yokuqhakanjiswa kwala makhono: elokulalela, elokubhala, elokufunda, elokukhuluma kanye nelokwethula lwenziwe ezikoleni ezikhethiwe esifundeni saseKing Cetshwayo
Bengu, Rodney Muzikayise Martin
Iqoqa lalo msebenzi wocwaningo lokusetshenziswa kolimi lwesiZulu ukuze kuqhakanjiswe amakhono aqukethe ubumtoti, ukuhlwabusa nokuyihlaba esikhonkosini ngolimi lwesiZulu luhlelwe lwaba izahluko eziyisishiyagalombili. Isahluko sokuqala isethulo socwaningo esethula ucwaningo ngokupheleleyo. Lapha kubukwa intshisekelo yocwaningo, izinhloso zocwaningo, amakhono, izindlela zokuqhuba ucwaningo, umklamo wocwaningo, imibono yongoti, abazohlomula, uhlaka lwezahluko nesiphetho. Isahluko sesibili sethula ikhono lokulalela nokuzwa. Lesi sahluko sethula umehluko phakathi kokulalela nokulalelisisa ngenhloso yokuzwa uqonde. Sethula izindlela zokulalela, izindlela zokufundisa ukulalela kanye nenzwa yokulalela. Isahluko sesithathu sethula injulakuhlaziya ulwazi ngamakhono okusetshenziswa kolimi. Kulesi sahluko kubhekwe okushiwo ongoti abehlukene behlaziya imiphumela eyehlukene ngokubuka injula yolwazi nxazonke. Isahluko sesine sethula izindlela noma amasu okuqhuba ucwaningo. Kula masu kusetshenziswe uhla-mbuzo isizindalwazi (inthanethi), ukuhanjelwa kwezithangami, amaphephandaba, ukubuxoxa nezinjulabuchopho nezazi emikhakheni ethile. Kube sekuvezwa ngokolandela imibono yongoti okuncomekayo ngezindlela ezisetshenziswayo uma kuqoqwa ulwazi kanye nokufekela kwazo. Isahluko sesihlanu sethula ukuhlelwa nokwethulwa kolwazi oluqoqiwe. Njengoba ulwazi luqoqwe ezingxenyeni ezehlukene lube seluhlelwa kanjalo. Kunolwazi oluqoqwe kothisha, bamabanga aphansi naphezulu, olunye luqoqwe kubafundi nabo ngokwehlukana kwamazinga. Olunye luqoqwe ezikhulwini zeminyango kaHulumeni emihlanganweni, olunye beluqoqwa ezingxoxweni nezazi ezehlukene, ulwazi lwamaphephandaba, izincwadi imibhalo yongoti, ingosi yesizindalwazi (inthanethi) nakumabonisakude imbala. Isahluko sesithupha sethula ikhono lokubhala, elokufunda nelokuphendula. La makhono ehlukene kepha asebenza ngokubambisana kanti kuvamile ukuba asebenze ngesikhathi vii esisodwa kanyekanye. Lesi sahluko sethule izindlela ezinconywe ongoti zokufundiswa kwekhono lokufunda, elokubhala nelobuciko bokuphendula imibuzo. Lesi sahluko sibuye sethula ikhono lokukhuluma nokwethula. Ukwethula nokukhuluma kuzwakala kufana ngoba ngisho kwethulwa inkulumo kusuke kukhulunywa. Lezi zimo zidinga amanye amakhono ukuze okukhulunywayo nokwethulwayo kudlule ngobuciko kuya kwabalalele nabethamele. Ongoti baphawulile ngala makhono beveza umehluko kanye namasu okucija ikhono lokukhuluma nokwethula. Babuye baphawula ngezimo ezinqinda ukusetshenziswa kwala makhono ngenzuzo. Isahluko sesikhombisa sethula ukuhlaziywa kolwazi lwamakhono olimi oluqoqiwe. Ikhono lokulalela nokuzwa, ikhono lokubhala, elokufunda, elokuphendula imibuzo, elokukhuluma nokwethula, ukuphumelela kwabafundi, ukuqeqesheka kothisha kanye nokulumbana kolimi nezombusazwe. Isahluko sesishiyagalombili sethula ukuhlaziywa kwamakhono, izincomo zocwaningo ngakho kubalwa ikhono lokulalela, ukufunda nokwazi ukuphendula imibuzo ngokunembayo nokusetshenziswa kwekhono lokubhala ngokubhala ubhalomagama olwamukelekile kanye nesiphetho.
Lwethulwa ukufeza izidingo zeziqu zobudokotela kwinzululwazi (Doctor of Philosophy) emnyangweni wezilimi zomdabu namasiko enyuvesi yaKwaZulu, 2019
Name: Ucwaningo ngokuse ...
Description: Ucwaningo ngokuse ...